Rasaasa News – Jaaliyada DDSI, oo ka Cabanaya Wada Shaqayn La,aan Saafrada Ethiopia ee Koonfur Afrika
Jaaliyada DDSI, oo ka Cabanaya Wada Shaqayn La,aan Saafrada Ethiopia ee Koonfur Afrika
on April 14, 2012 12:00 am
Jijiga, Apr 14, 2012 [ras] – Jaaliyada Degaanka Somalida Ethiopia ee Koonfur Afrika, oo ka cabanaysa wada shaqayn la,aan ka dhex jirta safaarada Ethiopia ee koonfur Afrika iyo xubnaha Jaaliyada degaanka ee nabada taageersan.
Safaarada Ethiopia ee Koonfur Afrika, ayaan siin wax gacan ah Jaaliyada degaanka Somalida Ethiopia ee degan Koonfur Afrika, sida waqadaha aqoonsiga, waraaqaha dhoofida [travel documents] iyo kala qayb qaadashada arimaha nabada ee ay xubnaha Jaaliyadu ka wadaan koonfur Afrika.
Wararku waxay intaas ku darayaan in xubno ka tirsan safaaradu ay sandareero siiyaan qaar ka mid ah xubnaha kooxda nabad diidka ah ee ku sugan koonfur Afrika. Iyaga oo dhinaca kale aan qaabilaad wanaagsan siin xubnaha Jaaliyada nabada degaanka Somalida ee koonfur Afrika.
Arimahan ayaa horseedi kara in ay kor u soo kacaan xubnaha kooxda nabad diidka ah ee ku dhaqan koonfur Afrika. Xubnahan ayaa ugu goodiya Jaaliyada nabada ee Koonfur Afrika in ay ka soo xidheen dhinac walba ugu dambayntana ay dili doonaan kuwa taageersan nabada beenta ah waa sida ay hadalka loo dhigaye.
Xubnaha Jaaliyada degaanka Somalida Ethiopia ee taageersan nabada iyo horumarku, waxay wakiil ka yihiin Jaaliyadaha dibada, Safaaradaha Ethiopia ee dibaduna waxaa mudan in ay gacan siiyaan.
Waxaa lagama maarmaan ah, in xubnaha Jaaliyaduhu ay xusuusnaadaan in ay jiri karaan xubno la shaqeeya safaaradaha, misna dhinaca kale xidhiidh la leh nabad diidka. Jaaliyadaha laftigooda xil baa saaran in ay hubsadaan shakhsiyaadka ay tuhmaan.
Waxaa jira cadow isugu jira shisheeye iyo sokeeye, gude iyo dibadba oo neceb Nabada iyo horumarinta degaanka Somalida Ethiopia, ka hortagiisana waajib waxaa uu ka saaran yahay dadweynaha degaanka Somalida Ethiopia iyo dawlada.